Kaompania CGHV: Nomen’ny fanjakana alalana hitrandraka herinaratra avy ao Volobe, Toamasina, mandritra ny 35 taona
Nomen’ny fanjakana Malagasy alalana ny kaompania CGHV (Compagnie Générale Hydroélectrique de Volobe) hitrandraka herinaratra avy amin’ny tohodrano ao Volobe, Toamasina, mandritra ny 35 taona. Notanterahana androany 13 febroary 2020 ny rangom-pohy mikasika izany sy ny fifanaovan-tsonia hividianan’ny JIRAMA herinaratra vokarin’ity kaompania ity.
Hiatomboka amin’ity taona ity ny asa fananganana ny tobim-pamokarana herinaratra ao Volobe izay hamokatra 120 MW ho an’ny faritra Atsinanana sy ny tambazotra iraisan’Antananarivo (RIA). Mialoha ny faran’ny taona 2023 no heverina hamokatra voalohany ity tobim-pampokarana herinaratra ity.
Tokantrano manodidina ny 360 000 no hisitraka izany ary hiteraka asa maherin’ny 400 ny fanatanterahana ny tetikasa.
Famerenana fifidianana kaominaly: Miandry ny governemanta ny tetiandro avy amin’ny CENI
Kaominina miisa 24 no haverina ny fifidianana Ben’ny tanàna miaraka amin’ny fifidianana mpanolontsaina. 120 andro aorian’ny naharaisan’ny ministeran’ny Ati-tany ny fampahafantarana ny didim-pitsarana nanambarana ny vokatra ofisialy ny fifidianana kaominaly navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana no voalazan’ny lalàna fa anatanterahana ny famerenana ny fifidianana.
Mbola ny lalàna no manondro fa manao fangatahana volavolana tetiandro avy amin’ny CENI ny governemanta, izay ny CENI vao manolotra ny tetiandro hanatanterahana io fifidianana io.
Lalàna ihany koa no mamaritra fa 90 andro mialoha ny latsabato no iantsoana ny mpifidy.
jeudi, 13 février 2020 11:00
Vita, omaly, ny fandraisana ara-teknika ny Kianja mitafo vaovao eo Vatofotsy ary dia ho tokanana tsy ho ela ity foto-drafitrasa ity.
Dingana iray hampakarana avo ny lentan’ny fanatanjahatena eto Antsirabe ny fahazoana ity Kianja mitafo ity.
jeudi, 13 février 2020 10:27
Isoanala (RN13): Taksiborosy nisy nanafika, maty ny mpamily iray, voaroba ny mpandeha
Fiara « carandal » mitondra mpandeha niainga avy ao Antananarivo hiazo an’i Tolagnaro, no notafihin’ny andian-dahalo telopolo lahy mitam-basy tamin’ny lalam-pirenena faha-13 teo amin’ny tanànan’i Manakilova Tsimitsoy, Kaominina Isoanala, Distrikan’i Betroka ny alin’ny alarobia hifoha ity alakamisy 13 febroary ity.
Nitifitra ireo dahalo nampijanonana ny fiara. Voa teo amin’ny kibony ny mpamily naratra mafy, nitarika amin’ny fahafatesany. Voaroba avokoa ny vola sy firavaka ary entana lafo vidy an’ny mpandeha, anisany very tamin’izany ny fananan’ireo atleta solontenan’ny faritra Anôsy avy niatrika fifaninanam-pirenena tao Antsirabe Vakinankaratra.
Tsy nijanona teo fa nanafika tanàna teo amin'ny manodidina ireo andian-dahalo ireo, ka olona roa tompon’omby voatifitry ny dahalo, nisy tamin’ireto farany koa voatifitry ny Zandary.
Nametra-pialana tsy ho mpanazatra ny klioba Jet Mada i Rakotondrabe Romuald, fantatry ny maro amin’ny solon’anarana Maitre Rôrô. Nanaja ny fanapahan-keviny ny klioba.
Fantatra taorian’izay fa lasa mpanazatran’ny As ADEMA Analamanga i Maitre Rôrô.
Laharana faha-5 mitovy ny As ADEMA sy ny Jet Mada eo amin’ny fifaninanana Pro League.
jeudi, 13 février 2020 10:16
13 février: Journée mondiale de la radio.